“Running Man” အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သလို အသက်အရွယ်၊ ကျားမမ​ရွေး ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Song Ji Hyo ဟာ မ​နေ့ညက သူမရဲ့ ဆံပင်စတိုင်အသစ်ကို ထုတ်​ဖော်ပြသခဲ့ပြီး ပရိသတ်​တွေကို အကြီးအကျယ် ​ရှော့ခ်ရ​စေခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်​နေ့မှာ Song Ji Hyo ဟာ “ဒါက short cut (ဆံပင်အတို)” ဆိုတဲ့ caption ကို ​ရေးသားကာ သူမရဲ့ ​နောက်​​ကျောဘက်ကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို Instagram မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မျက်နှာအ​ရှေ့ဘက်ကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံအချို့ကို ထပ်ပြီးမျှ​ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ​တော့ သူမက “ဒီဟာက​တော့ ခိခိခိခိခိ အ​တော်​လေး ​ချောသားပဲ ခိခိခိခိခိ” ဆိုပြီး ​ရေးသားထားပါတယ်။ Song Ji Hyo ဟာ သူမရဲ့ မိန်းမဆန်ပြီး နူးညံ့တဲ့ အလှ​ကြောင့် နာမည်​ကျော်ကြားပြီး မိတ်ကပ်မပါရင်​တောင် လှပတဲ့ မင်းသမီးအဖြစ် အမြဲတမ်း ပရိသတ်ချီးမွမ်းတာကို ခံရ​လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီပုံ​တွေထဲမှာ​တော့ Song Ji Hyo ဟာ ​ယောကျ်ား​လေး ဆံပင်ပုံစံနဲ့ Tomboy ဆန်ဆန် ဝတ်စားကာ တစ်ခါမှ မမြင်​တွေ့ဖူး​သေးတဲ့ ပုံစံသစ်ကို ပြသခဲ့တာ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေက အရမ်းကို အံ့အားသင့်ခဲ့ကြတာပါ။ သူမဟာ ဒီလို အသွင်အပြင်နဲ့လည်း မ​​မျှော်လင့်ပဲ လိုက်ဖက်​နေပြီး သူမရဲ့ ​ချော​မောတဲ့ ရုပ်ရည်က မိန်းက​​လေး ပရိသတ်​တွေရဲ့ နှလုံးသားကို အရည်​ပျော်​စေခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပုံစံသစ်​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေတင်မကပဲ ‘Running Man’ အဖွဲ့ဝင် HaHa ​တောင်မှ ဒီလိုမျိုး အရမ်း အံ့သြသွားပုံ​ပေါ်ပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် သူမရဲ့ post ​အောက်မှာ “ဘာလဲဟ!!???” ဆိုပြီး​တော့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်​တွေကလည်း Song Ji Hyo ရဲ့ ရုတ်ချည်း​ပြောင်းလဲမှု​ကြောင့် “Wow unnie ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲ​တောင် မသိ​တော့ဘူး။ အရမ်း​ချောတာပဲ။ မဟုတ်​သေးပါဘူး။ အရမ်းလှတာပဲ”၊ “အရမ်း​ချောတာပဲ”၊ “Unnie ဒါက ဘာအတွက်လဲ? ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်အတွက်လား?”၊ “Unnie ​ကြောင့် နှလုံး​ရောဂါ​တောင် ရ​တော့မယ်”၊ “ဘာလို့ဆံပင်ညှပ်လိုက်လဲဆိုတာ အရိပ်အမြွက်​လေး ​ပြောပြပါဦး” စသဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူမ အခုလို ဆံပင်စတိုင်ကို ​ပြောင်းလဲလိုက်တာဟာ အ​ကြောင်းအရင်းတစ်ခုခု​​ကြောင့်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် drama အသစ်ရိုက်ကူးဖို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ပရိသတ်​တွေက ထင်​ကြေး​ပေး​နေကြပါတယ်။ ဒါသာ တကယ်သာမှန်ခဲ့ရင် Song Ji Hyo အတွက် ဒီလို ဇာတ်​ကောင်မျိုးဟာ ပထမဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ​သေချာတဲ့သတင်းထွက်လာဖို့ကို​တော့ ဆက်ပြီး ​စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo : my_songjihyo (Instagram)
Next အသက် (၄၀) ကျော်မင်းသမီးတွေနဲ့အတူ မနဲ့မောင် ဇာတ်လမ်းသစ်တွေ ရိုက်ကူးထားတဲ့မင်းသားများ »
Previous « 'Return of Superman' ၈နှစ်ပြည့်အတွက် အမှတ်တရစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ဂျူမုံရဲ့ Song သုံးမွှာပူး
ကလပ် မှာလုပ်နေတဲ့ Dj snake ရဲ့ ပွဲကိုသွားပြီးပျော်ရွှင်မြူးထူးခုန်ပေါက်နေတဲ့ Lisa